Sekumi ngomumo ngamalungiselelo eNdoni | News24
Sekumi ngomumo ngamalungiselelo eNdoni
ISITHOMBE:SITHUNYELWE Konke sekumi ngomumo koweMiss Indoni Cultural SA ozoba se Inkosi Albert Luthuli Convention Centre (ICC) ngempelasonto.
KUZOKWENZEKA okungajwayelekile koweMiss Indoni Cultural SA walo nyaka njengoba abasiki bengqephu abadumile baseThekwini bezothola ithuba lokukhombisa ngemisiko yabo yesintu neyesimanjemanje.
Lo zime ozoba se-Inkosi Albert Luthuli Convention Centre (Durban ICC) ngoMgqibelo ngo-7 pm kulindeleke ukuba uthanyelwe izicukuthwane ezingaphezu kwenkulungwane eziqhamuka emazweni ahlukene. Phakathi kwalezi cukuthwane kubalwa ubuholi beKhabhinethi, izikhulu zoMnyango wezoBuciko namaSiko namaciko asembonini yezikaqedisizungu ahlukene.
Umsunguli weMiss Indoni Cultural SA uDkt Nomcebo Mthembu uthe uzime walo nyaka uhlukile njengoba ozonqoba engezugcina ngokuwina imoto kuphela, kepha yena nozomlandela bezothola imifundaze yokuqhuba izifundo zemfundo ephakeme ezikhungweni abazozikhethela zona.
“NjengeNdoni siqhakambisa imfundo phambili ukuze kwakhiwe isizwe,” kusho uDkt Mthembu.
Kulo mcimbi kuzobe kuncintisana onobuhle abangu-12 abamele izizwe ezihlukene okubalwa amaZulu, Xhosa, Ndebele, Swati, Pedi, Thembu, Mpondo, Tsonga, Sotho nabaTswana.
Okhulumela uMiss Indoni uMnu Zazi Nxele uthe uhlelo luzophathwa imbongi uLebo Mashile bese umculo uqhululwa uThandiswa Mazwai